I-Titleist 716 iIons (AP1, AP2, CB, MB) kunye ne-816H Hybrids
I-Titleist 716 AP1 kunye ne-AP2 Irons
I-Titleist AP1 (phambili) kunye ne-AP2 (ngasemva). Acushnet Co.
Oktobha ka-Oktobha 2015 umkhiqizo wokukhishwa kwemveliso wawuquka iiseti ezine zeetoni kunye neqela elisebenzayo / ama-hybrid clubs. (Kwaye sawaphonsa kwiibhola zabo zegalufu zakutshanje ngelo xesha.).
I-Intanethi ye-716 AP-efika kwi-AP1 (ngohlu olubanzi lwabagadi begalufa) kunye ne-AP2 (kubabenzi bezixhobo eziphantsi) -buyisela imizekelo ye-714 kumgca wenkampani. Ngako-ke i-716 CB (i-cavityback) kunye ne-MB (i-muscleback) ifakwe ngamacwecwe.
I-Titleist nayo yamemezela ngasekupheleni kuka-2015 i-iron utility ye-716 T-MB, kunye ne-816H hybrids (eya kwi-816H1 ne-816H2).
Uzakufumana iibhola zeGolf TruSoft zeglasi kule nqaku, ezithatha indawo ye-DT SoLo kwibhola yegolfu yenkampani.
Siza kuqala nge-AP irons:
I-Titleist 716AP Irons
I-716 AP ivela kwi-Titleist iyenzelwe ukudibanisa isikhulu esiphantsi sogunyaziso nge- MOI ephakamileyo, ukuncedisa abagadi begalufu ngokunciphisa imiphumo ye-mishits (ukuthethelelwa kwongeziweyo) ngelixa kukhulisa i- angle yokuqalisa (ukufumana ezo zixhobo zikhupha emoyeni).
Ukwahluke phakathi kweesethi ezimbini, i-AP1 ne-AP2?
Iiploni ze-AP1 ziluhlu olubanzi lwabagadi begalufa kwaye luxolela ngokuphindaphindiweyo kwezi zimbini; Ukuba ufuna umgama omkhulu kunye nokuxolela, i-AP1 yindlela oyithandayo.
I-AP2 iinjongo ezijoliswe kuzo "abadlali abafuna umgama kunye nokuxolelwa kwintsimbi ebonakaliswe ngetyelelo," kusho u-Titleist. Ezi zixhobo zomdlali kubadlali begalufu abanokukhubazeka okuphantsi.
Zombini iiseti zifikelela kumazwe athengisa ngeentengiso kwihlabathi lonke ngo-Oktobha 23, 2015.
I-Titleist 716 AP1 Iirons
Yonke isizukulwana esitsha sesitrato siphumela kwelinye lenkxaso yokugqibela yenkampani ebizwa ngokuba "iinqwelo ezide kakhulu, ezixoxwa kakhulu eziye zadalwa!" Kwaye i-716 AP1s ngoku iyakuboniswa ngoluhlu oluvela kwi-Titleist.
Ukulinganiswa kweTungsten kuhlanganiswe kuyo yonke into eyenziweyo - i-tungsten engaphezulu kwe-50 engama-tungsten isetyenziswe ngokuqhathaniswa nesixhobo sokuqala sesizukulwana se- Titleist 714- ukwandisa ukuphakama kwe- perimeter , kwaye idala ukuzinza okunamandla kwimpembelelo ngaphandle kokunyuka kwithuba elide.
Ukubeka kwakhona ukulinganisela kukunyusa i-MOI kwaye kunciphisa isikhundla seCG, kwakhona, iinjongo eziqhelekileyo kwiintsimbi ezakhelwe uluhlu olubanzi lwegalufa. I-angle ephakamileyo yokuqalisa ukuba iziphumo zivumelekile kwi-Titleist ukuqinisa i-lofts (imizekelo engezantsi) kumgama omkhulu.
"Ubuso obunqamlekileyo," obuthatyathelwe ngaphaya komgudu ogqithiseleyo, uxhamla ngakumbi kwiimpembelelo zokukhuthaza isivinini sebhola.
Umgca wephambili ogqityiweyo kunye ne- cambered kuphela unceda ukusebenzisana kwe-turf, ukudala uqhagamshelwano olucocekileyo kunye nobuncinci obungaphantsi.
Izinketho ze-stock shaft ziyi-True Temper XP90 (insimbi) kunye ne-Mitsubishi Kuro Kage TiNi 65 (i-graphite), ezo zombini ziyi-design-launch designs.
I-lofts iqala kuma-degrees angama-19 kwi-iron-3 kwaye iquka ama-degree angama-25 kwi-iron-5, i-degrees ezingama-31 kwi-iron-7 kunye ne-43 degrees.
I- MSRP i-$ 125 eneensimbi zensimbi okanye i-$ 150 kunye negraphite ( MAP ye $ 112.50 kunye ne $ 137.50, ngokulandelanayo, okanye, kwi-set, $ 899 / $ 1,099). Ukucwangciswa kwebhola ye-8 ku-3-PW, kunye needariji ezimbini (47 no-52 degrees) nazo ziyafumaneka.
I-Titleist 716 AP2 Iirons
Ibanga elibonakalisiwe, "ukuxolelwa, ukuxolelwa, ukuzithethelelwa, ezo zinto ziphawulekayo I-Titleist icacisa ngeenombolo ezingu-716 ze-AP2 (eqinisweni, ezenza umdlalo kwiindwendwe ezihamba phambili ngasekuqaleni konyaka kwaye, ngokwe-Titleist, enye yeyona -iyimijondolo ye- cavityback kwiindlela zokutyelela).
Njengoko i-AP1s, i-AP2s i-716 ine-tungsten engaphezulu yokulinganisa kwi-clubheads kuneyaphambili labo, ipesenti ezingama-25 ngaphezu kwama-714 AP2. Izisindo ze-tungsten zidibanisa kunye nomzimba we-carbon steel 1025, ekuncedeni ukudala iphrofayili ephantsi ye-CG / ephezulu ye-MOI enceda kwimpembelelo engaphantsi kweyona nto (kunye neempembelelo eziphambili, nazo).
I-MOI i-8.5 ekhulwini ephakamileyo kwiimpawu ezide ezifaniswa nama-714, kunye ne-5.5 ekhulwini ephakamileyo kwisiseko esipheleleyo. Ubude bomda bubuhlobo obuncinane kwi-AP1s, njengokuba zikhethwa kwiimfono zedlali. Iingqungquthela zincinci nje kunokuba zikhona kwi-714 AP2 model, kunye ne-relief edge yokunceda ekuncedeni nge-turf ukusebenzisana.
I-shaft yesitokethi ye-716 AP2 isetyenzisi yenyithi ye-True Temper Dynamic yegolide ye-AMT, ekhanyayo kwiimfono ezide kunye nobunzima kwiimpawu ezifutshane. Ukhetho olongezelelweyo luyalelwe.
I-Lofts iqala kuma-degrees angama-21 kwi-iron-3 kwaye iquka ama-27 degrees kwi-5-iron, i-degrees ezingama-34 ze-7-iron kunye ne-46 degree degree.
I-MAP yi-$ 1,199 (i-3-intsimbi nge-PW) kunye ne-shafts okanye i-$ 1,399 ngegraphite. Ukufumana ulwazi oluthe vetshe, tyelela i-titleist.com.
I-Titleist 716 CB kunye ne-716 MB Irons
I-Titleist 716 CB kunye ne-716 MB irons. Acushnet Co.
Njengoko i-716 AP ifakwe kwikhasi elidlulileyo, i-Titleist 716 CB kunye ne-716 MB irons ibonisa ukusetyenziswa okwandisiweyo kwe-tungsten ukulinganisa kwi- clubhead ukudala iimpawu zendiza ezikhethiweyo zebhola.
Kodwa zombini ezi zixhobo zifaneleke kakhulu kubagolisa abanezakhono. Umehluko omkhulu phakathi kwabo usegama labo:
I-716 CB irons ine-cavityback eyenza ukuxolelwa ngaphezu kwe-MB;
Iimpawu eziyi-716 MB zizele i- muscleback blades for golfers abathanda loo nto, eqinileyo, ukuvakalelwa kunye nobukeka bendabuko.
Zombini iiseti zakhiwe, kwaye zombini zithatha iimpahla zentengiso emhlabeni wonke ngo-Oktobha 23, 2015.
Inkqubo yokubambisana iqulunqa i-MOI ephezulu kunye ne-tungsten yokulinganisa iphantsi kunye neenzwane kunye nesithende, nto leyo iyanciphisa isikhundla sendawo yokucima amandla. Ukuxolelwa kwabangelwayo kwi-716 i-CB irons kufana nokufana nalokho kusetyenziswe kwi-714 AP2, kwaye i-MOI iphakamileyo ye-12 ekhulwini kwi-716 imodeli kunama- CB 714 .
Amacwecwe aqingqiweyo anokuba nobude obungapheliyo ngokusetyenzwa, kwaye isikhundla seCG siqhubela phambili ngokusetyenzwa, sigcina i-trajectory ekhethiweyo, ehamba phambili kunye nokuziqinisa.
"Kusengumdlali weebhola," watsho uDan Stone, oyiNtloko kaMongameli we-Titleist Golf Club R & D. "Kusengumlenze omncinci, kodwa ngoku ubuye uxolele kakhulu iqela."
I-shaft esitokweni kwi-716 CB irons iyinsimbi ye-True Temper Dynamic Gold ye-AMT, ekhanyayo kwiimpawu ezide kunye neyona nto inzima kwiimpawu ezifutshane. (Izinketho ezizenzekelayo zikhoyo.)
I-Lofts iquka i-degrees ezingama-21 kwi-3-iron, i-degrees ezingama-31 ze-6-iron kunye nama-degrees angama-47. Kukho inani elincinci le- offset elinciphisa njengoko uhamba ukusuka kwiinqwelo ezide ukuya kwiimfono ezimfutshane.
I-MAP yesethi ye-8 (3-PW) i-$ 1,199 i-shafts kunye ne-1,399 yee-shafts. Insimbi yesibini iyafumaneka.
I-Titleist 716 MB Irons
Ukuba ufuna loo mveli, i-muscle epheleleyo ibheka kwiindawo zakho, ukuvakalelwa okuqinisekileyo kwintsimbi kunye neentonga ezigxininisa ukunyameka, isethi esingu-716 MB iya kukhetha.
I-muscleback iphakanyisiwe, ibeka ngaphezulu kwemisipha emva kwebala elimnandi. Umgca onqamlekileyo kunye neenqwanqwana zesikwele uphulaphule yonke indlela eya kwi-2003 yee-Arrions 680 eziqingqiweyo, i-Titleist ithi.
Kwinqanaba le-muscle ephezulu yizikhundla ze-CG eziqhubekela phambili ngokusetyeni, ukugcina umzila ophantsi kokulawula njengoko uhamba kwiincinci ezimfutshane.
Umgca ohamba phambili okhokelayo unceda iqela lihambele nge-turf ngaphandle kokumba (kwaye likhoyo kwi-CB model).
I-shaft ye-stockist ye-Titleist i-716 MB irons iyinsimbi ye-True Temper Dynamic Gold, kodwa eyongezelelweyo, kunye negraphite, ukhetho lukhoyo.
I-Lofts ifana nalabo abakwi-716 CB, nangona iinqwelo ze-MB zincinci kakhulu.
I-MAP yesethi ye-8 (3-PW) i-$ 1,099 eneempahla zensimbi kunye ne-1,299 yee-shafts. Ukufumana ulwazi oluthe vetshe, tyelela i-titleist.com.
Isihloko se-Titleist 716 T-MB iIones Irons
Isihloko se-Titleist 716 T-MB yentsimbi. Acushnet Co.
Iiklabhu zee-hybrid ezinjengeentsimbi ezisetyenziselwa ukuba zixhaphake kakhulu, emva kwimihla yangaphambili xa i-hybridi iqalile ukuhamba. Namhlanje, kungekhona kakhulu - ama-hybridi enjengokhuni enza phantse yonke i-market hybrid market.
Isihloko sihlawulela loo ndlela nge-716 T-MB Iones Irons Utility - kodwa uqhubeka nomoya wayo wokunikezela ngeenkunkuma. "T" yenzelwe "iteknoloji" kunye ne "MB" ye-muscleback. Oku kunene: izixhobo zesebenzi ezakhelwe kwisakhelo se-muscleback.
Musa ukucinga nge-716 T-MB yenkonzo yesinyithi njengensimbi yokushayela; Cinga nje nge-hybrid: Yenzelwe ukutshintsha iimfono ezide kwi-golfer's setting, nangona unikezelwa ngumbumba wendlela yentsimbi kunye ne-muscleback design, i-T-MB ijoliswe kwiigolisa ezingcono.
Ngoxa i-716 T-MB isebenzise izixhobo ezithengisa iimpahla kwi-Oktobha 23, 2015, zitshintshile ixesha elide, isethi esipheleleyo-ukusuka kwiimfono ezide ukuya kwiincinci ezimfutshane-zingalawulwa isiko.
I-Intanethi ye-716 T-MB i-utility irons inikezela nge- angle ephezulu yokuqalisa , ukuphatha umgama kunye nokuxolelwa okuthe xaxa xa kuthelekiswa neentsimbi ezide.
Ubuso obunqabileyo buhlala kwisakhelo se-muscleback kwaye lunika ithuba lokukhawuleza kwebhola. Futhi indlela yokulinganisa i-tungsten esetyenziswe kwezinye iironi ezi-716 ezichazwe kumaphepha adlulileyo zisebenza kwi-T-MBs, kwakhona: ukulinganisa kwe-tungsten ngaphakathi komzimba kubumba isikhulu esiphantsi soguqulelo (okubhekiselele kuqaliso oluphezulu) kwaye luvumela i-lofts ephezulu.
Unokucinga ngee-716 ze-T-MB ezisetyenziswayo njengezithuba zabaphambili kwiimodeli ezingu-712U kwintsapho ye-Titleist. Uninzi lwabasebenzi bezetwendwe zabathengi basebenzisa ii-712U iitoni ziye zatshintshela kumzekelo omtsha. Ukuqhathaniswa ne-712U ekuvavanyeni i-robot, i-716 T-MBs ivelisa ukuya kwi-2 mph isivinini sebhola ngaphezulu, i-200 rpm ngaphantsi kwe-backspin kwaye, nangona i-loft-1-degree eqinile, igcina i-angle engqinelanayo. Ukukhulisa umyinge kuthwala umgama ngeeyadi ezine.
I-T-MB 2-iinqwelo nge-5-iitoni ziza kubona kwivenkile. UMoto we-MOTO uza kunika ukulandiswa kwesiko ngokusetyenwe ngokupheleleyo (3-iron ngePW).
I-MSRP yi-$ 225 nganye kwiblabhu enezakhiwo zensimbi kunye ne-$ 250 ngegraphite. Isiko-esilungiselelwe ngokusetyenzwa ngokupheleleyo siya kuba ne-MAP ye $ 1,599 (isethi ye-8) / i-$ 1,799. Ukufumana ulwazi oluthe vetshe, tyelela i-titleist.com.
I-Titleist 816 H1 kunye neH2 Hybrids
I-Titleist 816 H1 (phezulu) kunye neH2 hybrids. Acushnet Co.
I-Titleist 816H i-hybrids isithuba sokutshintshwa kwesebe esenzelwe ukwandisa umgama kunye ne-angle ephezulu yokuqalisa kunye ne-angle engaphezulu. Ukuyibeka phezulu, ngaphezu kwamandla amaninzi okuyeka, u-Titleist uthi, xa kuthelekiswa nensimbi ende.
I-816H i-hybridi ivela emibini imizekelo, ebizwa ngeH1 kunye ne-H2:
I-816H1 i-hybrids: Ezi ziphakamileyo kakhulu ngokugxila kumgama kwaye zibe neprofayile enkulu (i-clubhead enkulu). Ukunyuka kwenyameko ebusweni kukunceda ukukhwabanisa.
I-hybri 816H2: I-clubhead encinci iya kubhenela kubadlali abangcono; banokwenza okuncane. Ukulungeleka kubadlali begolfu abaguqula ngokugqithiseleyo kwaye banokusebenzisana okungaphezulu kwe-turf. Kwakhona uvelise ibhola leplanethi ngaphandle kweH1.
Zombini zemizekelo zithi "I-Channel Recoil Channel" eyi-Titleist, i-slot edeleyo, ejulile engasemva kwe- clubface eyenza ubuso buguquke ngakumbi kwiimpembelelo. Oko kuthetha ukungaphaya kwexesha, isivinini sebhola esiphezulu. Kwakhona kunceda ukukhusela ibhola ngokukhawuleza kubetha ubuso.
Umzuzu we-inertia (oguqulela ekuxoleleni) ngowama-7 ekhulwini ephezulu kwi-H1 kunesizukulwana sangaphambili sesizukulwana sika-915H (i-H2 ine-MOI efanayo kwi-915Hd).
Kwakhona kumabini omabili yi-Titleist's adjustable Warefit Tour hosel elungisa i-loft kunye nebala elizimela ngokuzimela; kunye ne-SureFit Flatweight (ekhoyo kwiinqwelo ezili-6 amagremu, 9, 11, 13 no-16).
I-Titleist 816H i-hybrids inezikhonkwane ezimpunga ngobuso obumnyama kunye neengcambu. Zombini zemizekelo ziza kwiindawo zokurhweba ze-19, 21, 23 kunye nama-degrees ama-25, kunye ne-27-degree H1.
Ukufumaneka kokuthengisa kuqala ngo-Oktobha 23, 2015, nge-MSRP ye $ 269. Ukufumana ulwazi oluthe vetshe, tyelela i-titleist.com.
I-Titleist DT TruSoft Iimpawu zeGolf
Ukupakishwa 'kwe-DT ebomvu' yeeBhola zeGritist DT TruSoft zegalufa. Acushnet Co.
Ibhola elitsha elitsha le-golf le-DT kwi-Titleist lithatha elinye lamalungu entsapho, ngelixa liqhubeka nesithethe salo.
I-DT TruSoft ithatha indawo ye-DT SoLo kwi-ballist. I-SoLo yayiyibhokisi ephantsi kakhulu yenkampani, kodwa i-TruSoft ithatha isihloko eso, kwaye iyancipha kwi-compression ngaphandle kweSoLo.
Inqobo yenkxalabo yenkxalabo iphezulu kwaye ilula ngaphezu kweSoLo, kunye nesimboli se-ionometer iyona elula kakhulu, kodwa i-Titleist ithi. Kodwa loo nto iphoxayo iza ngaphandle kokunikela umgama okanye ukudlala ngokujikeleza imifino, inkampani ithi.
Iibhola zeGrafti zeDT TruSoft zegalufa ziza ezimhlophe kwaye ziphuzi kunye nebhokisi elibomvu eliqhelekileyo lomgca we-DT we-Titleist. I-MAP yi-$ 21.99 kwaye ukufumaneka kweentengiso kuqala ngo-Oktobha 1, 2015.
I-Top Skate Shoes ekhuthazwayo
Ride i-Caste Caster
I-Callaway Big Bertha kunye noBertha Alpha Abashayeli
Konke malunga neCompming Loaded Camming Devices
Ukukhishwa kweGear for Routes
Indlela yokwakha iiAnchors ezikhuselekileyo
I-Steel neGraphite I-Shafts Golf: Yintoni efanelekileyo kumdlalo wakho?
I-Admissions yeKholeji yaseClaremont McKenna
Umxholo weMatarin Daily: "Uyolo" ngesiTshayina
E-Arizona Education kunye neZikolo
Ukuphendula ngokuDlulela kabini Inkcazo
I-Sexist Media, i-Sexist Ihlaseli Ibuhlungu Abafazi Kwizopolitiko
IWedleyan University Admissions
Ezi ziBridge eziDumeleyo kwiAgusta National Golf Course
Umthandazo kuSt Gerard Majella, uMphathiswa woMama kunye nabantwana abangakazalwa
Iyini i-Quantum Optics?
Iingoma ezili-Top Ten Drinking Songs
I-Triathletes yoLuhlu lweeNcwadi zokuThengiswa kweNkxaso Yemihla ngemihla
I-Dinosaurs Yalwa Kanjani?
Iimfuno zoMculo eziPhambili ze-Essential Musical